RASMI: Isku aadka wareega Shanaad ee FA Cup-ka oo la sameeyay… (Chelsea oo qaabili karta Liverpool & Rooney oo wajihi kara Man Utd) – Gool FM
(England) 27 Jan 2020. Isku aadka wareega Shanaad ee koobka FA Cup ayaa la sameeyay daqiiqado kahor, waxaana isku beegmi kara kooxaha waaweyn ee horyaalka Premier League qaarkood.
Haddii Liverpool ay awood u yeelato inay ka soo gudbaan kulanka ku celiska ah ee wareega afaraad ee koobka FA Cup-ka ay kula ciyaari doonaan Shrewsbury, kaddib bar-bardhacii 2-2 ah ay galeen, waxay kula ciyaari doonaan wareega shanaad kooxda kubadda cagta ee Chelsea.
Dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal oo caawa kula ciyaareysa wareega afaraad ee tartankan naadiga Bournemouth, ayaa waxay ku beegmi doontaa haddii ay soo adkaato kooxda Portsmouth.
Kooxda Manchester City oo tartankan difaacaneysa ayaa lagu aadiyay Sheffield Wednesday.
Halka Sheffield United ay la ciyaari doonto kulanka wareega shanaad koobka FA Cup kooxaha Reading iyo Cardiff tii soo baxda.
West Bromwich Albion ayaa la ciyaari doonta kooxda soo baxda Newcastle iyo Oxford United, halka Leicester City ay wajihi doonto tan soo baxda kooxaha Coventry City iyo Birmingham.
Ugu dambeyntii kooxda Ole Gunnar Solskjær ee Manchester United ayaa waxay wajihi doontaa kooxda u soo gudubta wareega shanaad ee tartankan Northampton iyo Derby County, iyadoo kabtankoodii hore ee Wayne Rooney oo wata Derby County uu wajihi karo kooxda ka arimisa garoonka Old Trafford.